Ireo mpandraharaha afrikana 25 izay namindra ny kaontinanta - AFRIKHEPRI
Ireo mpandraharaha tanora 25 Afrikana izay manosika ny kaontinanta
Fifandraisana FAMPIANARANA BUSINESS
Lireo mpandraharaha tanora dia manova ny tavan'i Afrika. Nanapa-kevitra ny hamoaka lisitr'ireo Afrikana 25 latsaky ny 30 taona aho izay misy fiantraikany manaitra ny kaontinanta. Mba hanaovana izany, dia nanakarama mpitsara 12 avy any amin'ny lafivalon'i Afrika aho tamin'ny volana Novambra lasa teo mba hanampy hamantatra ity vondron'olona mpandraharaha tena sy vaovao ity ao anatin'ny 30 taona.
Avy tena toetrany amin'ny ara-bola fotoam-pivavahana avy orinasa mpamokatra entana, haino aman-jery, ny teknolojia, ny teknolojia maitso, fahasalamana, fambolena sy ny lamaody, 30 mpandraharaha tanora afrikanina, disruptive sy mitondra zava-baovao ao amin'io lisitra dia te hanova Afrika. Miaraka izy ireo dia misolo tena ny tsara indrindra amin'ny fandraharahana, sy ny fanavaozana ara-tsaina renivohitr'i ny taranaka.
Mamaha olana tahaka ny tsy fahampian'ny toeram-pitsaboana sy ny herinaratra izy ireo, manome vahaolana vaovao ho an'ny fitantanana ny fako, manangana vondrona virtoaly sy vatana ary mamorona asa maro. Ny sasany amin'izy ireo dia manao ny sakafo izay tiantsika, akanjo amam-boninahitra ho an'ny vehivavintsika ary ny sasany dia mamolavola fandaharana mahafinaritra ho an'ny finday manerana an'i Afrika.
Mazava ho azy, ity lisitra ity dia tsy hoe ofisialy na mahavariana, fa io no akaiky indrindra amin'ny zavatra azonao avy amin'ny lisitra farany.
Ny manodidina ny tehaka ho an'ny 30 30 ambany taona Afrika tanora mpandraharaha ny tsara indrindra avy amin'ny Tanibe, disruptive ankehitriny sy ny mamirapiratra kintana eny amin'ny rahampitso:
Jonathan LIEBMANN (Afrika Atsimo), Mpamorona ny tetik'asa momba ny fananan-tany ary tale jeneralin'ny Propertuity
LIEBMANN, 28 taona, dia ny Tale Jeneralin'ny Propertuity, any Afrika Atsimo Real Estate orinasa fampandrosoana. Izy no atidoha ao ambadiky ny fanorenana ny Maboneng City, ny ara-kolontsaina niroborobo distrika any amin'ny tany atsinanana ny CBD any Johannesburg. Taloha tsirambina sy niharatsy manodidina feno nandao indostrialy-be, Maboneng dia niova ny Liebmann amin'ny tanàn-dehibe tanàna mavitrika amin'ny fampiasana samy hafa firenena fampirantiana zavakanto, mpanakanto 'Studios, toerana ara-barotra sy ny birao.
Patrick NGOWI (Tanzania), Tale Jeneralin'ny Helvetic Solar Contractors
Neny taona lasa izay, Patrick NGOWI, taona 28, dia nahazo karama kely avy amin'ny reniny hanomboka orinasa iray. Nanomboka nivarotra finday finday sinoa izy, saingy rehefa hitany fa ny ampahany kely amin'ny Tanzania dia tsy afaka nahazo herinaratra azo antoka sy azo antoka, fantany fa tsy maintsy mamaha ilay olana izy. NGOWI dia nanangana Helvetic Solar Contractors Limited, orinasa mpisava lalana amin'ny famatsiana, fametrahana sy fikojakojana ny rafi-masoandro manerana ny faritra avaratr'i tanzaniana. Helvetic Solar Contractors no orinasa voalohany any amin'ny faritra avaratr'Antananarivo izay mahafeno ny filan'ny masoandro. Ny orinasa dia nanao $ 3 amin'ny vola miditra tamin'ny herintaona.
Lorna RUTTO (Kenya), Green Entrepreneur Green sy mpanorina ny EcoPost
Lorna RUTTO, dia ao amin'ny 28, ilay mpanorina ny EcoPost, orinasam-pivondronana mahasoa iray izay manamboatra posts ara-panatanjahantena, maharitra sy mahasalama amin'ny alàlan'ny fampiasana plastika, fitaovana hafa kokoa amin'ny tontolo iainana amin'ny hazo. (...) Nahazo laza iraisam-pirenena i RUTTO noho ny ezaka nataony tamin'ny fametrahana vahaolana hafa ho an'ny fitantanana ny fako any Kenya izay atahorana amin'ny plastika.
Justin STANFORD (Afrika Atsimo), Mpanorina sy tale jeneralin'ny 4Di Group
STANFORD, taona 28, dia mpandraharaha amin'ny rindrambaiko sy kapitalista. Fito taona lasa izay, nahazo zon'ny fizarana manokana izy ho an'ny ESET, rindrambaiko manohitra ny virus avy any Slovakia. Androany, Stanford ESET atsimo-Afrika dia manatontosa marika ESET ao amin'ny faritra ary mivarotra ny vokatra ESET an'ny vokatra fiarovana amin'ny aterineto any amin'ireo firenena 20 any Afrika atsimon'i Sahara. Ny orinasa dia mitatitra mihoatra ny 10 millions ny varotra isan-taona sy ny fanaraha-maso momba ny 5% amin'ny tsena Antivirus ao Atsimon'i Afrika. Stanford koa dia mpanorina ny Capital 4Di, orinasan-danjam-bola ao Cap Town.
Rapelang RABANA (Afrika Atsimo), Mpanorina ny Yeigo Communication
Rapelang Rabana, 28 taona, no PDG sy ny mpamorona ny Yeigo Serasera, orinasa zava-baovao monina ao Cape Town, izay fifandraisan-davitra dia hampivelatra rindrambaiko, anisan'izany ny tolotra mifandraika amin'ny Voice over IP, hafatra, lahatsoratra ary hafatra fanohanana ny serivisy iraisam-pirenena. Ao amin'ny 2008, Telfree, orinasan-tserasera finday iray no nahazoana ny tsenan'ny 51% tao Yeigo.
Kimiti WANJARIA & Ian KAHARA (Kenya), Mpanorina ny tranom-barotra Serene Valley
Samy amin'ny faran'ny ny faharoapolo taonany, Kimiti Wanjaria Kahara sy Ian dia ampahany amin'ny vondrona efatra mpiara-manorina ny tony Valley Properties (SVP), ny Real Estate fampandrosoana orinasa ao Nairobi izay manorina sy mivarotra fananana toeram-ponenana any Kenya for ny kilasy antonony mitombo. Ny SVP dia ao ambadik'ilay tetikasa fampandrosoana an'i Sigona Valley, trano fialamboly ivelan'ny Nairobi navoaka amin'ny $ 4,2 $.
Vakio ihany koa: IYF World Camp XYUMX: 2015 Tanora manatrika
Evans WADONGO (Kenia), Filohan'ny SDFA Kenya
WADONGO dia Kenyana injeniera 26 taona izay namorona ny masoandro nitondra fanala antsoina hoe Mwanga Bora (Swahili ho "mazava tsara"), ny famoronana izay efa hisolo smoky jiro solitany sy ny hazo afo any Kenya ambanivohitra. WADONGO nizara an'arivony ireo fanilo any ambanivohitr'i Kenya, izay misy ny kely, na tsy misy herinaratra. Ny fandaminany, Maharitra Development Ho rehetra (SDFA) dia fanomezana hery fanohanana ny fandraisana andraikitra izay mampianatra mahantra Keniana ny fomba miteraka masoandro ireo fanilo sy ivarotana tombony.
Ludwick Phofane MARISHANE (Afrika Atsimo), mpanorina ny Headboy Industries
Marishane 21 taona taloha, dia ny mpanorina ny Headboy orinasa, orinasa iray atsy Afrika Atsimo izay nivoatra sy mihazona ny patanty ho Drybath, ny voalohany gel / menaka fanosotra amin'ny hoditra germicidal hafa ny fandroana ho an'ny hoditra.
Cosmas OCHIENG (Kenya), Mpanorina ny Ecofuels Kenya
Cosmas OCHIENG dia Kenyana mpandraharaha izay mitantana Ecofuels 26 taona Kenya, Afrika Atsinanana orinasa iray mamokatra maitso ny zezika organika biofuels sy ny tontolo iainana sy avy amin'ny loharanom-baovao azo havaozina vazimba teratany, toy ny bazana Croton.
Eric MUTHOMI (Kenya), Mpanorina ny Stawi Foods & Fruits
Izany Kenyana mpandraharaha 26 taona no mpanorina ny sakafo sy ny voankazo Stawi, ny start-up-baovao izay manome ho an'ny tantsaha madinika akondro avy any ambanivohitr'i Kenya sy fonosana azy ho eo an akondro koba.
Joel MWALE (Kenya), Mpanorina ny SkyDrop
MWALE izay manomboka amin'ny taona 20 dia mandrisika ny orinasa SkyDrop, orinasa fampangatsiahana rano fisotro madio izay mamoaka rano madio ho an'ny rano fisotro madio, ronono sy vokatra hafa any Kenya. Nanangana SkyDrop tamin'ny Desambra 2009 i MWALE ary ny orinasa amin'izao fotoana dia mampiasa olona mihoatra ny 20.
Verona MANKOU (Congo), Tech Entrepreneur, mpanorina & tale jeneralin'ny VMK
MANKOU no mpanorina ny VMK, orinasan'ny teknolojia mifantoka amin'ny teknolojia finday, indrindra fa any amin'ny planeta, aty Afrika, tablette, PC sy smartphones. Ao amin'ny 2011 VMK dia manolotra ny Way-C, ny solosaina voalohany Android-tablette PC. Ny Way-C dia mivarotra amin'ny $ 300 $ ary misy any Congo sy Frantsa. Ny VMK ihany koa dia manamboatra smartphone afrikana Android antsoina hoe Elikia. Mankou dia 26 taona.
Vakio ihany koa: Tatitra: Zazavavy, nahoana ianao no tokony handeha hifidy
Opeyemi AWOYEMI, Olalekan OLUDE & Ayodeji ADEWUNMI, Nizeria Mpanorina an'i Jobberman
Ny trio dia nanangana an'i Jobberman, ny fikarohana lehibe indrindra ao Nizeria sy ny fikambanana. Jobberman dia nanolotra ny serivisy tamin'ny 2009 tamin'ny Aogositra, ary androany dia manintona mpitsidika mihoatra ny 50.000 ny tranonkala isan'andro. Miaraka amin'ny teknolojia tsotra nefa vao haingana, i Jobberman dia mampifandray olona mahafeno fepetra ho an'ny asa mety. Jobberman dia iray amin'ireo orinasa vitsivitsy ao amin'ny sehatry ny teknolojia ao Nizeria izay tohanan'ny renivohitra.
Oluwaseun OSEWA (Nizeria), Mpanorina an'i Nairaland
Oluwaseun OSEWA nizeriana no mpanorina an'i Nairaland, sehatra forum amin'ny aterineto lehibe indrindra any Afrika. Nanangana ny tranokalany tamin'ny Martsa 2005 izy ho toy ny seha-pifanakalozan-kevitra ankapobeny mifandraika amin'ny lohahevitra mahaliana ny Nizeriana. Niala ny tranonkala. Nairaland amin'izao fotoana izao dia efa manana mpampiasa voasoratra anarana maherin'ny 1 ary no tranonkala malaza indrindra any Nizeria. Hanome hevitra: Ao Nizeria, Nairaland dia mahazo fitsidihana bebe kokoa noho ny Wikipedia. Nairland no mahatsapa ny fitantanana azy noho ny lisitry ny dokam-barotra.
Ashley UYS (Afrika Atsimo), Mpanorina ny Medical Diagnostech
Ny orinasa Ashley Uys, Medical Diagnostech, dia manangana sy fitaovana takatry ny tsena sy azo antoka ara-pahasalamana ho an'ny tazomoka fitsapana, ny fitondrana vohoka, ny tety, ny VIH / SIDA ho an'ny ambanivohitra mahantra ao Afrika Atsimo. Pf / PAN fitaovana (pLDH) ny orinasa izay mizaha toetra ny tazomoka afaka mamantatra ny sorisory ao amin'ny tazomoka sy mampiseho amin'ny 30 minitra raha omena fitsaboana ny tazomoka mahomby. Ny volana Novambra lasa teo, ny Medical Diagnostech dia nahazo ny 120.000 $ amin'ny lokan'ny SAB Foundation amin'ny fanolorana ny Innovation 2th Annual Social Awards. Uys dia manana 29 taona.
Sizwe NZIMA (Afrika Atsimo), Mpanorina ny Iyeza Express
Ny mpandraharaha Afrika Atsimo 21 taona mitarika Iyeza Express, orinasa zava-baovao izay manampy mba hampihenana ny fihoaran'ny isan'ny indray voafonja ao amin'ny andrim-panjakana amin'ny alalan'ny fahasalamam-bahoaka fanangonana nanolotra bisikileta ny zava-mahadomelina ao amin'ny toeram-pitsaboana sy toeram-pitsaboana ho an'ny mponina ao amin'ny faritanin'i Western Cape, izay misy fanafody maharitra.
William KAMKWAMBA (Malaoi), mpamoron-javatra
Hihaona amin'ilay zazalahy nanararaotra ny rivotra. Teraka tany Malawi, i William 14 taona monja rehefa nanao Windmill hamokarana herinaratra avy amin'ny fako mba hanome loharano tsy tapaka rano ho an'ny fianakaviany ny toeram-pambolena any amin'ny tanànan'i Masitala akaiky avy amin'i Wimbe. Tamin'ny dynamo bisikileta sy ny peratra ny rojo vy, ny traktera mpankafy, fingotra fehikibo sy volotsangana, William nahavita hanorina Windmill izay manome hery miasa ampy radio roa sy efa-takamoa . Niorina tamin'ny fahombiazana maivana tamin'ilay rivodoza voalohany, i William dia nanamboatra rivotra lehibe iray hanampiana ny fitetezana ny tanànan'i Kamkwamba ary mianatra momba ny mari-pahaizana momba ny tontolo iainana sy ara-teknika ao amin'ny Dartmouth College any Etazonia. USA.
Sandra APPIAH sy Isaac BOATENG (Ghana), CoMpanorina ny Face2Face Africa
Sandra Appiah, 23 taona, sy Isaac Boateng, 28 taona, Ghaneana roa no mpanorina ny Face2Face Africa (F2FA), ny haino aman-jery vaovao orinasa miorina any New York City izay andraikitra dia ny hamerina ny endriky ny Afrika amin'ny fiaraha-monina manerantany. Ny orinasa dia manana antokony telo: ny marika izay mamoaka ny gazety manadihady ny fampandrosoana, ny kolontsaina, ny fialam-boly sy ny lamaody any Afrika, zava-nitranga iray fitantanana ny orinasa sy ny tranonkala mavitrika.
Vakio ihany koa: YALI: 1000 dia mipetraka ho an'ny 2016
Ola OREKUNRIN (Nizeria), Dokotera sy mpanorina ny Flying Doctors
Dokotera Nizeriana sy mpandraharaha ara-pahasalamana, OREKUNRIN, 25 taona, no mpanorina ny Flying Doctors Nigeria, ny serivisy voalohany amin'ny fiara fitaterana an-tsambo tany Afrika Andrefana. Ny dokotera mpitsidika Nizeria dia manolotra helikoptera, fiara mpamonjy voina ary sampan-draharaha any Nizeria sy any amin'ny firenena hafa any andrefan'i Afrika.
Andrew MUPUYA (Oganda), Mpanorina ny fampindramam-bola amin'ny fampindramam-bola tanora (YELI)
Tao amin'ny 2008, dia nanangona dolara 18 avy amin'ny fianakaviana sy ny namana i Andrew ary nanomboka nanao kitapo taratasy kely kely. Tao amin'ny 2010, izy no namorona ny orinasa, Youth Entrepreneurial Link Investments (YELI), izay ny orinasam-piraharahana voalohany eo an-toerana ao Uganda. Ny orinasa amin'izao fotoana izao dia mampiasa ny 15 Ogandà ary YELI dia mpamatsy vola taratasy sy valopy ho an'ny toeram-pitsaboana, fivarotana, mpivarotra an-dalambe ary mpamokatra lafarinina ao an-toerana. Teo anelanelan'ny 2008 sy ankehitriny, YELI dia namokatra kitapo feno taratasy sasantsasany tapitrisa tapitrisa. Andrew Mupunya dia 20 taona.
Chude JIDEONWO & Adebola WILLIAMS (Nizeria), Mpanorina ny Media Maoderina sy ny Tetikasa Future
JIDEONWO sy WILLIAMS dia mpiara-manorina sy mpiara-miombon'antoka avy ao amin'ny Red Nigeria, mpampita vaovao iray feno filaminana, orinasam-pifandraisana sy fampandrosoana any Nizeria. Ny orinasa ihany koa dia manana ny tetikasa Future (TFP), fomba fiasa ara-tsosialy ara-barotra izay manome ny loka Future isan-taona, loka lehibe indrindra ao Nizeria ho an'ny tanora Nizeriana miavaka.
Mark KAIGWA (Kenya), Associated with Afrinnovator
Mark KAIGWA, 25 taona, dia talen'ny talenta manana talenta, talenta, distributor dizitaly ary mpandraharaha. KAIGWA dia mpiara-manorina sy mpiara-miasa amin'i Afrinnovator, orinasa iray mikendry ny hametraka an'i Afrika amin'ny sarintany amin'ny famoahana ireo zava-mahadomelina amin'ny alàlan'ny fanavaozana Afrikana, teknolojia ary fanombohana. Izy koa dia mifandray amin'ny African Digital Art, loharano loharanon-kevitra an-tserasera ho an'ny fanentanam-panahy amin'ny famoronana, sary, sary ary sary avy any Afrika.
Arthur ZANG (Kamerona), mpamoron-javatra
Tamin'ny herintaona, Arthur Zang, 25 taona, ny injeniera Kamerone dia nanamboatra ny Cardiopad, tabilao misy dokotera misy sarimihetsika. Amin'ny Cardiopad, fanadinadina karazana toy ny electrocardiogram (ECG) dia azo atao any amin'ny faritra ambanivohitra, raha ny vokatra azo avy amin'ny toeram-pitsaboana kosa dia alefa any amin'ny manam-pahaizana manokana izay afaka mandika azy ireo. Tokony hivarotra ao amin'ny 2013 ny Cardiopad.
Thula SINDI (Afrika Atsimo), Mpandraharaha sady mpanorina ny Thula Sindi
Amin'ny taona 28, izy no iray amin'ireo tanora mpamorona lamaody malaza indrindra any atsimon'i Afrika. Rehefa vita ny fianarany tao amin'ny Sekoly Londres'ny Londres'ny Londresy, dia nandraisany ny asany voalohany amin'ny maha-lehibe ny orinasa Vlisco, orinasam-pambolena holandey. Nandao azy tsy ela taorian'izay izy mba hanomboka ny marika akanjo tsy maotina izay mamolavola, manamboatra ary manamboatra akanjo vita amin'ny akanjo vita amin'ny vehivavy.
Farai GUNDAN (Zimbabwe), mpanorina Farai Media
Ity orinasam-pampitam-baovao Zimbaboeana ity ary mpandraharaha amin'ny aterineto no mpanorina ny Farai Media, sehatra fampiroboroboana an-tserasera amin'ny aterineto sy finday mifantoka amin'i Afrika. Izy koa dia mpiara-manorina ny AfricaTripDeals, rafitra fizarana fizaran-tany manerantany any Afrika.
Avy amin'i Mfonobong Nsehe, dikanteny Frantsay by nextafrique.com
Ny niandohan'ny teny hoe toubab
L'acceptation de soi - Documentaire